eDeshantar News | शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? जोखिममा पर्नुहोला नी ! - eDeshantar News शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? जोखिममा पर्नुहोला नी ! - eDeshantar News
अर्थ देश / समाज
शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? जोखिममा पर्नुहोला नी !
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोवारको वृद्धिसँगै शेयर कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ भएका गुनासा प्राप्त भएको बोर्डको भनाइ छ । सो बारेमा बोर्डले आवश्यक अध्ययन समेत गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि केही समय लाग्ने भन्दै बोर्डले धितोपत्र लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले गर्न नहुने भनेर निदृष्ट गरेको क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सबैलाई सजग गराएको छ ।
लगानीकर्तालाई देशको आर्थिक परिदृश्य सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय कार्यसम्पादनको आधारभूत विश्लेषण प्रति शेयर आम्दानी, नेटवर्थ, मूल्य आम्दानी अनुपात, किताबी मूल्यमा बजार मूल्यको अनुपात आदिको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ । बजार मूल्य सम्बन्धी प्राविधिक विश्लेषण, संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई समेत हेरेर लगानी गर्न बोर्डले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।